Codsiga Kaalshiyamka Kaloridey ee Shidaalka Saliida iyo Biyo-dhaqashada
Kaalsiyamka Kloride waa cusbo aan dabiici ahayn, muuqaalkuna waa cadaan ama cad-cad-cad, flake, prill ama granular, wuxuu leeyahay Calcium Chloride anhydrous iyo Calcium Chloride dihydrate. Kaalshiyamka Kaloride-ka waxaa si ballaaran loogu adeegsadaa warshado badan sababtuna tahay astaamaha jirka iyo kiimikada. Samaynta waraaqaha, ka-qaadidda boodhka iyo qalajinta ayaa ah kuwo aan laga sooci karin Calcium Chloride, iyo ka faa'iideysiga batroolka iyo dhaqashada xoolaha, oo xiriir dhow la leh dhaqaalaha iyo nolosha, ayaa ah mid aan laga sooci karin doorka Kaalshiyamka Kalorideka Marka, door noocee ah ayuu kaalshiyamka chloride ka ciyaaraa labadan qaybood?
Ka faa'iideysiga saliidda, Kaalshiyamka Kaloride-ka anhydrous waa maaddo muhiim ah, maxaa yeelay geeddi-socodka ka-faa'iidaysiga saliidda ee lagu daro kaalshiyamka kaloride-ka leh fuuq-baxa ayaa leh codsiyada soo socda:
1. Xasilinta lakabka dhoobada:
Ku darista Kaalshiyamka Kaloride-ka wuxuu xasilin karaa lakabka dhoobada ee moolka kala duwan;
2. Qodida saliida: si loo saliido qodista si loo hubiyo shaqada macdanta;
3. Samaynta godka godka: isticmaalka Kaalshiyamka chloride-ka oo leh nadiif saa'id ah si loo sameeyo godka godka waxay ka ciyaari kartaa door go'an saliida ceelka;
4. Demulsification: Kaalshiyam chloride-ka ayaa hakin kara hawl gaar ah oo ionic ah, kaalshiyamka chloride kaamil ah ayaa leh doorka naaqusinta.
Kaalshiyamka chloride waxaa si ballaaran loogu isticmaalaa qodista ceelka saliida sababtoo ah qiimaheeda oo hooseeya, si sahlan loo keydsan karo loona isticmaali karo.
Maaddada ugu weyn ee loo adeegsado biyo-dhaqidda waa Calcium Chloride dihydrate, oo hoos u dhigta pH-ka balliga.
Qiimaha pH ee ku habboon inta badan xayawaannada biyaha ku jira balliyada biyaha lagu dhaqo ayaa dhexdhexaad u ah waxoogaa alkaliin ah (pH 7.0 ~ 8.5). Marka qiimaha pH uu si aan caadi ahayn u sarreeyo (pH≥9.5), waxay u horseedi doontaa falcelinno aan wanaagsaneyn sida heerka koritaanka oo gaabis ah, kororka isku-darka quudinta iyo cudurrada xayawaanka ku nool dhul-gariirka. Sidaa darteed, sida loo yareeyo qiimaha pH waxay noqotay cabbir farsamo oo muhiim u ah xakamaynta tayada biyaha balliga, sidoo kale waxay noqotay goob cilmi baaris kulul oo lagu xakameeyo tayada biyaha. Hydrochloric acid iyo acetic acid ayaa caadi ahaan loo adeegsadaa xakameeyayaasha acid-base, kuwaas oo si toos ah u baabiin kara ion hydroxide-yada biyaha si loo yareeyo qiimaha pH. Tiro badan oo tijaabooyin ah ayaa caddeeyay in Kaalshiyamka Chloride ay leedahay saameynta ugu wanaagsan ee ku yeelashada xajmiga pH ee balli-biyoodka marka la barbar dhigo hydrochloric acid iyo acetic acid.
Marka labaad, kaalshiyam chloride-ka ku jira aquaculture sidoo kale wuxuu door ka ciyaaraa hagaajinta adkaanta biyaha, hoos u dhaca sunta nitrite.
Kalshiyaam Bromide Liquid, Natrium Hydrosulfite, Kaalshiyam Bromide Anhydrous, Xalka Kaalshiyam Bromide, Hydrosulfite, Hydrosulfite De Sodium,